စက်မှုဇုန်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ China Manufacturer
Pneumatic ဖျက်ထုတ်နေ Valve,အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတားအမျိုးအစားချ,ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ YJD-တစ်ဦးက
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Pneumatic ဖျက်ထုတ်နေ Valve,အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတားအမျိုးအစားချ,ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ YJD-တစ်ဦးက
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve > စက်မှုဇုန်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
စတား discharge ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး, လေထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အစာကျွေးသည်အခြားကိရိယာများများအတွက်အဓိကပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမှုန့ပစ္စည်းများနှင့်တောင့်ပစ္စည်းအဘို့သင့်လျော်သည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သတ္တုဗေဒ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဘောဇဉ်, အစားအစာနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနအတွက်အသုံးပြုသည်။
တဦးတည်း, ထိုကြယ်ပွင့် type ကိုချ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:
1. အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါသည်, ပုံသဏ္ဍာန်အဆင်းလှကြောင်း, အသုံးပြုမှုအဆင်ပြေပါတယ်။
2, ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်, အနိမ့်ဆူညံသံ။
3 ကြောင့်ဝံနှင့် shell ကိုစွန့်ခွာဂီယာ box ကိုကြားအကွာအဝေးရန်, မြင့်အပူချိန်နှင့်ချောဆီအရည်ကြည်ကိုအလွန်တိုးတက်ပြီ။
4, စက်ရုံကိုလည်းအသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ (bracket ကနားချင်းဆက်မှီခါးပတ်စလွယ်ကိုဆွဲ drive ကို)
5. စတားအမျိုးအစားချမှန်မှန်စစ်ဆေးနှင့်ဆီထည့်ကျေးဇူးပြုပြီးလျှော့ချအမှတ် 00. ၏အထူးအမဲဆီချမှတ်။
နှစ်ယောက်ကြယ်အမျိုးအစား discharge ၏အပူချိန်ကိုခုခံ:
သမရိုးကျကြယ်ပွင့် type ကို discharge ၏အပူချိန်ကိုခုခံစင်တီဂရိတ် 250 ဒီဂရီအထိရှိ၏ အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ကြယ်ပွင့် type ကို discharge စင်တီဂရိတ် 350 ဒီဂရီအထိရှိ၏ အဆိုပါသံမဏိကြယ်ပွင့် type ကိုချ 304 စင်တီဂရိတ် 450 ဒီဂရီအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပြီး, အများဆုံးအပူချိန်စင်တီဂရိတ် 900 ဒီဂရီကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြယ်ပွင့် discharge ၏အထက်ပါသုံးမျိုးအများဆုံးအလုပ်လုပ်အခြေအနေများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကအထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏လှံတံတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
သုံး, ကြယ်အမျိုးအစား discharge ၏ wear:
အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းပစ္စည်းများ၏အပြင်ဘက်နံရံနဲ့ရိနာစွဲအဆက်မပြတ်ပွတ်ပါလိမ့်မည်, နှင့် shell ကိုထွက်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်ပါကပြင်မြို့ရိုးကိုချိုးပေါက်ကြားစေပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေကိုအဘို့, ဖောက်သည်များကျွန်ုပ်တို့သည် wear-ခံနိုင်ရည်ချ device ကိုရှေးခယျြနိုငျအောငျ, purchasing မတိုင်မီပြုပြင်ခွအေနအေသတင်းအချက်အလက်ကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။
ရိနာစွဲအဆိုပါတံဆိပ်ခတ် bin နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြာဥတု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာသည့် dedusting ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးတို့ကို၏ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး, မြင့်အနုတ်လက္ခဏာ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုပုံးထဲမှာသေချာသောအမြင့်နှင့်အတူအပြာကော်လံရှိပါတယ် ထူးခြားတဲ့တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ အဆိုပါလှုံ့ဆျော၏ disconnector မြို့ရိုးကိုအကြားကွာဟချက်သည်ကြီးမားလွန်းသည်, ထိုသို့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်လာသောအခါပစ္စည်းပေါက်ကြားရန်လွယ်ကူသောကွောငျ့ယိုစိမ့်မှု၏ပြဿနာမကြာခဏကြယ်ပွင့် type ကိုပြာဆင်းအဆို့ရှင်၏အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရပါသည်။ ဤကိစ်စတှငျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလှုံ့ဆျောသို့မဟုတ်မြင့်မားသောတိစက်ပေါ်ပိတျထားသောပစ္စည်းကို add နိုင်ပါတယ်, နှင့်စက်တိကျမှန်ကန်မှု 0.5mm ကွာဟမှု၏အချင်းကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Pneumatic ဖျက်ထုတ်နေ Valve , အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတားအမျိုးအစားချ , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ YJD-တစ်ဦးက , ဖုန်ဖျက်ထုတ်နေ Valve Cement , Pneumatic V ကို Ball ကို Valve , soft ထိုင်ဂိတ် Valve , ကျီတစ်ခုစွတ် Valve , သံ Rotary ဖျက်ထုတ်နေ Valve သို့ကာစ်